के डिप्रेसन र मुटु रोग जोडिएको छ? - स्वास्थ्य शिक्षा | सेप्टेम्बर 2021
समुदाय कम्पनी, समाचार औषधि जानकारी, समाचार समाचार स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण कल्याण कम्पनी, औषधि जानकारी मनोरञ्जन कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा खेलहरु कम्पनी स्वास्थ्य औषधि जानकारी
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा >> के डिप्रेसन र मुटु रोग जोडिएको छ?
के डिप्रेसन र मुटु रोग जोडिएको छ?
तपाईंले सुन्नु भएको छ कि मोटाई, धूम्रपान र मधुमेहले हृदय सम्बन्धी समस्याहरूको सम्भावना बढाउँदछ। उच्च कोलेस्ट्रॉल, उन्नत उमेर, र पारिवारिक इतिहासको साथ Ditto। अब हृदय रोगको लागि अर्को ठूलो जोखिम कारक छ, र यो त्यो हो १.3..3 मिलियन वयस्क अमेरिकीहरू को साथ बाँच्नुहोस्: उदासीनता।
जब तपाइँ ओमेप्राजोल मा pepcid लिन सक्नुहुन्छ
उदासीनता, एक अवस्था जुन लामो उदासिनताको भावना हो र एक पटक रमाइलो गतिविधिहरुमा चासो गुमाउनु हो, गहिरो छ शरीरमा प्रभाव । यसले ऊर्जाको क्षति, भोक परिवर्तन, निद्रा अवरोधहरू, ध्यान केन्द्रित गर्नमा कठिनाई, र अधिक अधिक अध्ययनहरू पत्ता लगाउन सक्छ - हृदय रोग।
अनुसन्धान पत्ता लगाएको छ कि वयस्कहरूमा डिप्रेसन नभएका मानिसहरु भन्दा disease 64% अधिक हृदय रोगको सम्भावना बढी हुन्छ। अन्य अध्ययनहरूले जोखिमलाई नजिक राख्छ %०% । अझ के, डिप्रेशन र हृदय रोगका मानिसहरुमा ond%% जोखिम बढी हुन्छ हृदय रोगको शिकार हुनु वा हृदय रोगबाट मर्नुको खतरा उनीहरुको समकक्ष समकक्ष भन्दा। को अमेरिकी हार्ट संघ (एएचए) ले सिफारिश गर्दछ कि हृदय रोगीहरू डिप्रेसनको लागि जाँच गरिनु पर्छ।
मधुमेह, धूम्रपान, उच्च रक्तचाप, र मोटापा जस्ता चीजहरू जस्तै डिप्रेसन हृदयघातको जोखिम कारकको रूपमा पनि हुन सक्छ, सुझाव दिन्छ डेभिड कोर्टेभिल, MD , रोचेस्टर क्षेत्रीय स्वास्थ्य स्यान्ड-कन्स्टेलेसन हार्ट संस्थानको क्लिनिकल हृदय रोग।
डिप्रेसनले कसरी मुटुलाई असर गर्छ
तपाईंको मानसिक स्वास्थ्यले तपाईंको मुटुको स्वास्थ्यलाई कसरी असर गर्न सक्छ? वैज्ञानिकहरूको विचारमा त्यहाँ विभिन्न तरिकाहरू छन्।
जीवन शैली कारकहरू: यो कुनै ठूलो आश्चर्यको कुरा होइन कि राम्रोसँग खानको लागि उत्प्रेरित रहन गाह्रो छ र व्यायाम गर्नुहोस् जब तपाईं निराश हुनुहुन्छ। डिप्रेसनका मानिसहरु बढि सामान्य जनसंख्या भन्दा बढि बढि व्यायाम नभएको हुन सक्छ। र हामीलाई थाहा छ कि मोटोपना र निष्क्रियता हृदय रोगको दुई चालक शक्तिहरू हुन्।
सूजन : डिप्रेसनले शरीरमा कम ग्रेडको सूजन उत्पन्न गर्दछ। त्यो सूजनले धमनीहरूलाई साँघुरो बनाउँछ र सम्भावना बढ्छ कि धमनी भित्ताबाट प्लाक (कोलेस्ट्रॉलको भण्डारन) फुट्छ र यसैले जहाजहरू बन्द हुन्छ र मुटुमा रगतको प्रवाहमा बाधा उत्पन्न हुन्छ।
प्लेटलेट clumping: प्लेटलेटहरू रगतमा साना कोषहरू हुन्छन् जुन रगत जमिनका लागि आवश्यक हुन्छ। अनुसन्धान देखाउँदछ कि उदासिनता भएका मानिसहरुसँग बढी प्रतिक्रियाशील प्लेटलेट हुन्छन्, यसको मतलब उनीहरू मुटुहरुमा रगत प्रवाहमा बाधा उत्पन्न गर्ने थक्लीहरू बनाउने सम्भावना बढी हुन्छ।
हार्ट एरिथमिया: डिप्रेशन एकको एट्रियल फाइब्रिलेसन विकासको संभावना देखिन्छ, अनियमित मुटुको धड्कन । वैज्ञानिकहरू किन यो कुरा निश्चित रूपमा निश्चित छैनन्, तर तिनीहरू श suspect्काको बढेको स्तरमा शंका गर्छन् जुन अक्सर डिप्रेसनका व्यक्तिहरूमा देखा पर्दछ एक कारक हुन सक्छ।
के हृदय रोगले डिप्रेसन निम्त्याउन सक्छ?
प्राणघातक अवस्था जस्तै मुटु रोग, अमेरिका मा नम्बर एक हत्यारा , जो कोहीको मानसिक स्वास्थ्य मा यसको टोल लिन बाध्य छ।
अनुमानित २०% [हृदय रोग लागेको मानिससँग] डिप्रेसन छ र दुई तिहाइ भन्दा बढी डिप्रेसन पछिaपछि हृदयघात भन्छ, टोड हर्स्ट, एमडी, फिनिक्स, एरिजोनामा ब्यानर विश्वविद्यालय मेडिकल सेन्टरको साथ एक हृदय रोग विशेषज्ञ। यो सम्भावित धेरै कारणहरूको लागि हुन सक्छ, जस्तै सामाजिक पृथकीकरण, पीडा, बिरामी हुनु, कम कार्यात्मक स्थिति, डर, चिन्ता, र अनिश्चितता।
मुटुको शल्यक्रिया पछि डिप्रेसनको खतरा पनि छ। यी of० देखि %०% बिरामीहरू डिप्रेसन विकास गर्दछन्, डा। कर्तेभिले टिप्पणी गरे। त्यो सामान्य जनसंख्या भन्दा उच्च छ।
पोष्ट हार्ट अटैक डिप्रेसनको अर्को सम्भावित कारक? केही अध्ययनहरूले हृदय रोगको उपचार गर्न प्रयोग गरिने धेरै औषधिलाई औंल्याउँछन्।
बीटा ब्लकरहरू [ड्रग्स रक्तचाप कम गर्न र शरीरको तनाव हार्मोन एड्रेनालाईन नियन्त्रण गर्न प्रयोग] atenolol , metoprolol ,र carvedilolकेही अध्ययनहरूमा डिप्रेसनको बढेको जोखिमसँग सम्बन्धित छ, तर सबै होइन, डा। हर्स्ट भन्छन्। कुनै निश्चित निष्कर्ष निकाल्नु अघि थप अनुसन्धान आवश्यक छ।
र जबकि बीटा ब्लकरहरूले डिप्रेशनको जोखिम बढाउन सक्दछ, यो याद राख्नु महत्त्वपूर्ण छ कि उनीहरूको लाभले उनीहरूको जोखिमलाई उछिन्न सक्छ।
बीटा ब्लकरले हृदयको असफलता उल्टाउन कडा प्रदर्शन गरिएको छ, र सिस्टोलिक दबावमा हरेक १० एमएमएचजी ड्रपले हृदयघात र स्ट्रोकको सम्भावनालाई करीव %०% ले घटाउछ, वर्णन गर्दछ। कार्ल टोong्ग, एमडी, पीएचडी। , टेक्सास ए & एम विश्वविद्यालय कलेज अफ मेडिसिनमा एक हृदय रोग विशेषज्ञ र सहयोगी प्रोफेसर ।
के डिप्रेसनको उपचारले हृदय रोगको जोखिम कम गर्दछ?
यो त कारण कारण खडा, कि यदि तपाईं उदासिनता नियन्त्रण, तपाईं हृदय रोग को जोखिम कम।
एउटा अध्ययनमा, निराश व्यक्ति जोसँग उपचार गरिएको थियो antidepressants वा थेरापी पहिले हृदय रोग को विकास लक्षणहरु को हृदय घटना को जोखिम को 48 48% ले कम गर्‍यो।
डा। कोर्टेभिलका अनुसार चयनित सेरोटोनिन पुनःअपटेक अवरोधकर्ताहरू, वा एसएसआरआईहरू [एन्टीडिप्रेससहरूको वर्ग] हृदय रोगीहरूमा सुरक्षित र प्रभावकारी भएको देखाइएको छ। धेरै कार्डियाक बिरामीहरू बहु औषधिहरूमा छन् र हामीले ड्रग-ड्रग अन्तर्क्रियामा विचार गर्नुपर्छ। एसएसआरआईहरूमा, कम ड्रग-ड्रग अन्तर्क्रियाको साथ ती हुन् एसिटालोप्राम र sertraline । वेलबुट्रिन साथै सुरक्षित पनि देखाइएको छ।
जब यो उपचारको कुरा आउँदछ, संज्ञानात्मक व्यवहार थेरापी (सीबीटी) डिप्रेसनको उपचारमा सबैभन्दा प्रभावकारी देखीएको छ र यसलाई पहिलो-लाइन उपचार मानिनु पर्छ। CBT मनोचिकित्साको एक रूप हो जसले मानिसहरूलाई नकारात्मक विचारहरू वा भावनाहरूलाई बढी सकारात्मक व्यक्तिहरूमा पुनःभेट ​​गर्न मद्दत गर्दछ। डा। कोर्टेभिले बताउँछन् कि एसएसआरआईसँग सीबीटीको संयोजन गर्नु भनेको केवल एक वा अर्को प्रयोग गर्नु भन्दा [उदासिनताको उपचारमा] बढी प्रभावकारी देखिएको छ। डिप्रेसनको उपचारले हृदय घटनाहरूको जोखिम कम गर्दछ जस्तै हृदयघात, झड्का , र मृत्यु।
तपाईको जोखिम कम गर्दै
कुनै पनि गम्भीर स्वास्थ्य अवस्थाको तपाईको जोखिम कम गर्न अक्सर स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरू लाई लाइफ सिम्पल call मा बोलाउने कुरा आउँछ।
स्वस्थ आहार खानुहुन्छ
शारीरिक रूपमा सक्रिय हुनु
रक्तचाप नियन्त्रण गर्दै
राख्दै रगत चिनी चेक मा
स्वस्थ कोलेस्ट्रॉल स्तर कायम राख्दै
स्वस्थ तौल दायरा भित्र रहँदै
लगातार एरोबिक व्यायाम एक एन्टीडिप्रेससन्ट लिने जत्तिकै प्रभावकारी भएको प्रदर्शन गरिएको छ, डा। टो says भन्छन्। एएएचए प्रति सप्ताह १ 150० मिनेट मध्यम गहनताका एरोबिक व्यायामको सिफारिश गर्दछ (तेज हिड्ने, उदाहरणका लागि) वा गहन व्यायामको minutes 75 मिनेट। थप रूपमा, गतिविधि रक्तचाप, रगत चिनी, र एक स्वस्थ वजन को साथ मद्दत गर्न सक्छ।
अनुसन्धानले attacks०% हार्ट अट्याकमा कमी देखाउँदछ र स्ट्रोकमा %०% घटाउँछ जसले ती सबै कारणहरूलाई अनुकूलन गर्दैनन् उनीहरूको तुलनामा, डा। हर्स्ट भन्छन्। यो हामी सबैलाई लागू हुन्छ, हामीमा डिप्रेशन छ कि छैन। जहाँसम्म, डिप्रेसनको उपचारले कसैको लागि आफ्नो जीवन शैली परिवर्तन गर्न सजिलो पार्दछ।
के तपाइँ गर्मी मा फ्लू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ?
यदि तपाईं डिप्रेसन छ भने, यो निश्चित गर्नुहोस् कि हृदय रोगको लागि तपाईं मूल्या .्कन हुनुहुन्छ। र यदि तपाइँलाई मुटु रोग छ भने, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं हुनुहुन्छ डिप्रेसनको लागि स्क्रीनिंग गरिएको । डिप्रेसन र हृदय रोग प्रायः हातमा जाउँदछन् र उचित हृदय औषधी र एन्टिडप्रेससन्टहरूको साथ प्रत्येकको प्रभावकारी उपचारले शारीरिक र मानसिक रूपमा तपाईंको समग्र जीवनको गुणस्तर सुधार गर्न सक्दछ।
सबै प्रकारका साइड इफेक्टहरू र तिनीहरूलाई कसरी हटाउने
तपाइँको दममा कसरी ह्यान्डल पाउने जब यो यति चिसो हुन्छ
के तपाइँ ibuprofen संग tylenol pm लिन सक्नुहुन्छ
के खराब इन्फ्लुएन्जा ए वा बी हो
पिउने पानी एक खमीर संक्रमण निको पार्न सक्नुहुन्छ
कम से कम साइड इफेक्ट संग जन्म नियन्त्रण गोली